Doorashada 2015 ee Wakiilada - Meta
Doorashada 2015 ee Wakiilada
Wakiilada (Doorashooyin 2015) Caawinaad →
1.2 Shuruudaha buuxin waayey
Marashaxiintaan way iskaga hareen Murashnimadoodii:
Shuruudaha buuxin waayey
Wakiilada laftooda waxay diyaarinayaan doorashooyinka, Maamule yaasha diyaarinaya ee jaaliyadda, Philippe Beaudette. Waa la Board of Trustees goaamiyey 2009 in laga reebtoomo xaqiijinta doorashooyin cusub. waxaa jira, Steward waxay go'aansadeen in ay sameeyaan guddi doorashooyin ee ka kooban kuwa iskood wax u qabsa ah waxayna qabanayaan arimahaan soo socda:
Xiridda doorashooyinka ee qaaliyaasha;
Xiridda doorashada ee la hubiyey;
Haddii aad caawinaad ubaahantahay, Si xor ah u waydii #wikimedia-stewards-electionsconnect ama halkaan Bogga wadahadalka.
Liiska tirakoobka bogga
Qaybta dhammaan sy suurtoowday marashaxnimadooda
Dhamaan qaybaha aysan suurtoobin sharaxaadooda
Bogga isku dubaridka wakiilada hadda socda ee 2015
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Stewards/Elections_2015/so&oldid=18021006"
Last edited on 9 May 2018, at 05:25
This page was last edited on 9 May 2018, at 05:25.